अचम्म ! यो देशमा सडकले आफैं पुर्छ सडकका खाल्डाखुल्डी - Janata Times
सडकका खाल्डाखुल्डीबाट को पीडित नहोला ? हाम्रोजस्तो देशमा त सरकारको पूरै कार्यकाल नै एउटा सडकको खल्डाखुल्डी सम्याउँदैमा बित्दछ, तरपनि खाल्डा उस्तै रहन्छन् । विश्वमा सडक दुर्घटनामा हुने मृत्युमध्ये एक तिहाइ ती सडककै खाल्डाखुल्डीका कारण भएका हुन्छन् ।
तर यो दुनियामा एउटा यस्तो देश पनि छ जहाँ सडकका खाल्डा सरकारले पुरिरहनु पर्दैन, सडक आफैले आफ्ना खाल्डा पुर्दछ । नेदरल्याण्डमा बनाइएको छ यस्तो अद्भुत सडक । नेदरल्याण्डका वैज्ञानिकहरुले यस्तो पदार्थ पत्ता लगाएका छन् जसलाई सडक निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिन्छ र त्यसले आफुलाई आफै मर्मत गर्दछ ।
आफै मर्मत हुने एस्फाल्ट नामक पदार्थको नेदरल्याण्डका विभिन्न १२ वटा सडकमा परीक्षण भैरहेको छ । त्यसमध्ये एएटा सडक २०१० देखि नै संचालनमा छ, र अहिलेसम्म उक्त सडकमा कहीँपनि खाल्डाखुल्डी परेको छैन । सामान्य कंक्रिट तथा एस्फाल्टबाट बन्ने सडक ७ देखि १० वर्षमा मर्मत गर्नैपर्दछ । तर आफै मर्मत हुने एस्फाल्टबाट बन्ने सडक भने केही महंगो पर्ने भएपनि २०/२५ वर्षसम्म जस्ताको तस्तै रहन्छ ।
२४ माघ २०७३, सोमबार ११:००मा प्रकाशित
माओवादीबाट मारिएका कुलबहादुर परिवारको बिलौना : हत्याराले हामीलाई पनि मार्ने धम्की दिन थाले
सूर्यबिनायकलाई भष्ट्राचारमुक्त नगर बनाउने मेयर थापाको घोषणा
चुनावी तालमेल र एकताका लागी एमालेसग निर्णयक छलफल गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय